Arsenal Oo Wali U Soo Bixi Karta Champions League Iyo UEFA Oo Ay Ka Sugayaan Go'aanka Ganaaxa Man City. - Gool24.Net
Arsenal Oo Wali U Soo Bixi Karta Champions League Iyo UEFA Oo Ay Ka Sugayaan Go’aanka Ganaaxa Man City.
Arsenal ayaa xalay ceeb iyo qalbi jab kala kulantay finalkii UEFA Europa League ee dalka Azerbiajan ka qabsoomay kadib markii ay guuldaro 4-1 ah kala kulmeen kooxda Chelsea.
Arsenal waxay xalay seegtay u soo bixi taanka UEFA Champions League oo ka mid ahaa ujeedooyinkii ay ka lahaayeen finalkii Europa League.
Laakiin rajada Arsenal ee u soo bixitaanka UEFA Champions League ayaan wali dhamaan waxayna sugayaan go’aanka ay UEFA ku doonayso in ay Man City ku ganaaxdo.
Iyada oo warbaahin ay ka mid yihiin New York Times ay hore u shaaciyeen in UEFA ay wado ganaax ay dul dhigi doonto Man City oo lagaga saari doono Champions league ayay arintani noqotay fursada kaliya ee ay Gunners ugu soo laaban karto Champions League.
Haddii ayna UEFA go’aansan in Man City laga ganaaxo Champions League ama ugu yaraan dib loogu dhigo ilaa xili ciyaareedka soo socda, waxay markaas Arsenal ka sii ciyaari doontaa koobka ay xalay ku fashilantay ee Europa League.
Xidhiidhka kubbad cagta Yurub ee UEFA ayaa dhawaan soo saaray war rasmi ah oo ay ku cadeeyeen in kiiskii baadhitaanka Man City loo gudbiyay golaha garsoorka UEFA si ay go’aan uga gaadhaan.
Inkasta oo ay Man City si adag u beenisay in ay wax qalad ah ka samaysay sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub, haddana cadaymo uu soo bandhigay Football Leaks ayaa laf dhuun gashay ku noqday mulkiilayaasha carbeed.
Arsenal ayaan xili ciyaareedkan ku dhamaysan afarta kaalmood ee sare ee Champions League loogu soo baxo laakiin waxay ku jiraan kaalinta shanaad taas oo la micno ah in haddii Man City laga ganaaxo Champions League in ay iyagu soo gali doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa hadda haysata fursad kaliya oo ah in ay sugaan in UEFA ay ganaax ku soo rogto Man city, haddii kale waxay ku jiri doonaan Europa league.